Mpanamboatra Circuit Breaker - Mpamatsy & Ozinina mpanapaka Circuit Sina
B + C dingana telo oksidin'ny metaly...
ambongadiny 4P AC SPD 10KA sp...
ambongadiny 3 phase 10-20ka 3...
HM232-125/HM234-125 Tambiny amin'izao fotoana izao fiatoana miaraka amin'ny over-current fiarovana (RCBO)
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana amin'ny mpanapaka circuit miniature => RCBO-Unit (MCCB) Add-on sisa tavela amin'izao fotoana izao (fampifandraisan'ny screw) ho an'ny 80 na 125 A (2-pole sy 4-pole)
• Fahazoan-dàlana flfl avo sy mora ny fametrahana noho ny tariby miovaova (400 mm flfl exible tariby 2p = 2 singa, 4p = 4 singa tafiditra ao amin`ny set)
• Fifidianana maimaimpoana ny famatsiana herinaratra lehibe
• Fanovana fanampiny 1 NO tafiditra ho fenitra amin'ny dikan-teny FBHmV rehetra
• Mamela ny fampifangaroana miaraka amin'ny toetra isan-karazany noho ny tondra-drano samihafa sy ny toetran'ny AZ izay afaka mifandray
HB232-40/HB234-25 Sisan'ny Circuit Breaker (RCCB)
Elektrômekanika izy io.Ny zava-dehibe eto dia ny hoe:
1.Afaka tariby amin'ny lafiny roa.
2. Izy io dia mifanaraka amin'ny IEC / EN 61008-1 (RCCB mahaleo tena mahaleo tena), miaraka amin'ny famotsorana electro-mekanika izay miasa soa aman-tsara na dia tsy misy famatsiana herinaratra na tsipika ambany noho ny 50V.
3.Type -A: Miaro amin'ny endrika manokana amin'ny DC pulsating sisa tsy voavaha.
4. Fiarovana ny olona amin'ny fiatoana elektrika amin'ny fifandraisana mivantana (30 mA).
5. Fiarovana ny olona amin'ny fiatoana elektrika amin'ny fifandraisana ankolaka (300 mA).
6. Fiarovana ny fametrahana amin'ny loza ateraky ny afo (300 mA).
7. Manome fiarovana feno ho an'ny rafitra fitsinjarana an-tokantrano sy ara-barotra.
HO231N-40 Sisan'ny Circuit Breaker Miaraka amin'ny Fiarovana Be loatra (RCBO)
Ny RCBO vaovao dia tsato-kazo tokana miampy fitaovana tsy miandany mifamadika izay ahafahan'ny tsipika / entana mifandray avy any ambony na ambany.Ny tsy fisian'ny famerana amin'ny fampifandraisana ny famatsiana dia manatsara ny fiarovana ny fametrahana anao sy ny compact.Ny haben'ny tsato-kazo tokana dia ahafahan'ny tsato-kazo maromaro hiditra ao amin'ny fivoriambe manolotra vahaolana mahomby.
• Mifanaraka tanteraka amin'ny AS/NZS 61009-1
• Mifanaraka amin'ny Energy Safe Victoria - Fitakiana fitsapana fanampiny ho an'ny RCBO.
• Naoty amin'izao fotoana izao hatramin'ny 40A
• Type AC sy Type A fitaovana saro-pady misy
Nahatratra ny mari-pankasitrahana SAA Aostralia izy io, ary mandalo ny fitsapana ESV, dia azo alefa amin'ny lalana na aiza na aiza
Miaraka amin'ny Load AC Electric Isolation Switch
Fanorenana sy endri-javatra
■ Mahay mamadika circuit elektrônika misy entana
■ Omeo ny fiasan'ny fitokana-monina
■Tondro toerana hifandraisana
■Ampiasaina ho switch lehibe ho an'ny trano sy ny fametrahana mitovy
Tsara kalitao 1P 2P 3P 4P AC 230V 6A 16A 20A 40A 63A L7 DPN MCB Circuit Breaker
■Fiarovana amin'ny enta-mavesatra be loatra na ny fihoaram-pefy
■Haizan-jiro avo lenta
■ Mora apetraka eo amin'ny lalamby DIN 35mm
Ny sisa tavela amin'izao fotoana izao Breaker
■Miaro amin'ny fahadisoan'ny tany/leakage sy ny fiasan'ny fitokana-monina.
■Avo mahatohitra ny courant short-circuit
■Mihatra amin'ny terminal sy pin/fork karazana busbar fifandraisana
■Efa fitaovana amin'ny rantsan-tànany voaaro fifandraisana terminal
■Ny ampahany plastika mahatohitra afo dia miaritra hafanana tsy ara-dalàna sy fiantraikany mahery vaika
■Esory ho azy ny fizaran-tany rehefa misy lesoka amin'ny tany/leakage ary mihoatra ny saro-pady nomena.
■Tsy miankina amin'ny famatsiana herinaratra sy ny tsipika malefaka, ary tsy misy fanelingelenana ivelany, fiovaovan'ny volt.
Ny sisa tavela Circuit Breaker Miaraka amin'ny Fiarovana Be loatra
HO231N andian-dahatsoratra Residual Current Circuit Breaker amin'ny Overcurrent Fiarovana (avy eo dia antsoina hoe ny circuit breaker) dia mety amin'ny fampiasana amin'ny ac 50 Hz, nominal malefaka 230/400V, ampiasaina ao an-tokantrano sy ny toerana mitovy amin'ny laharana ankehitriny ny 40 A na ambany. fiarovana amin'ny fahatafintohinana elektrika manokana sy ny fahadisoan'ny tsipika fitaovana, dia azo ampiasaina ihany koa mba hiarovana ny tsipika na ny fitaovana be loatra sy ny circuit fohy. Amin'izay fotoana izay ihany koa ny vokatra miaraka amin'ny fiasa mitoka-monina, dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra mahazatra toy ny fiovan'ny tsipika tsy matetika. .
AC Contactor dia natao indrindra ho an'ny AC 50HZ na 60HZ faritra amin'ny 230V naoty miasa malefaka.Amin'ny fampiasana AC-7a misy laharana miasa hatramin'ny 230V, manana laharana miasa hatramin'ny 100A, dia miasa toy ny fanapahana lavitra sy ny fanaraha-maso ny faritra.Ity vokatra ity dia ampiharina indrindra amin'ny kojakoja an-tokantrano na ny fampidinana inductance ambany sy ny fanaraha-maso elektrômotera an-trano ampiasaina amin'ny tanjona mitovy.
RCCB-B-80A Tambiny amin'izao fotoana izao Breaker
Electro-mekanika izy io. Ny tena zava-dehibe eto dia ny hoe azo ampitaina amin'ny lalana roa izy.
HO232-60/HO234-40 Sisan'ny Circuit Breaker Miaraka amin'ny Fiarovana Be loatra (RCBO)
1. dia azo tariby amin'ny lafiny roa.
2. Izy io dia mifanaraka amin'ny IEC 61009-2-1 (RCBO mahaleo tena mahaleo tena), miaraka amin'ny famoahana elektro-mekanika izay miasa soa aman-tsara na dia tsy misy famatsiana herinaratra na tsipika ambany noho ny 50V.
4. Manome fiarovana amin'ny tsy fahatomombanan'ny tany/leakage current, short-circuit, overload, ary ny fiasan'ny fitokana-monina.
5. Manome fiarovana fanampiny amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny vatan'olombelona Miaro tsara ny fitaovana elektrika amin'ny tsy fahombiazan'ny insulation.
6. Manome fiarovana feno ho an'ny rafitra fitsinjarana an-tokantrano sy ara-barotra.
7.Avo vaky fahafahana hatramin'ny 10ka. kokoa azo antoka.